Emilio Butragueño oo ka warbixiyay mustaqbalka Julen Lopetegui ee kooxda Real Madrid kahor kulanka El Clásico – Gool FM
(Real Madrid) 24 Okt 2018. Agaasimaha xiriirka hay’adaha Real Madrid ee kooxda Real Madrid Emilio Butragueño ayaa xaqiijiyay in ay been abuur yihiin wararka ku aadan in Julen Lopetegui xiligan laga fasaxayo shaqada garoonka Santiago Bernabue.
Emilio Butragueño ayaa dhinaca kale tilmaamay in tababare Julen Lopetegui uu maamuli doono kooxda Real Madrid kulanka Axada soo aadan ee El Clásico ay horyaalka La Liga ku wada ciyaari doonaan Barcelona.
Real Madrid ayaa ugu dambeyn guul gaartay 5 kulan kadib, kulankii Champions League ay xalay kula ciyaareen kooxda Viktoria Plzen garoonka Santiago Bernabue, kadib markii ay kaga awood sheegatay 2-1.
“Julen Lopetegui wuxuu ku sugnaan doonaa kulanka El Clásico ay kooxaha Barcelona iyo Real Madrid ku wada ciyaari doonaan garoonka Cump Nou “.
“Xaalada waa mid caadi ah, sababtoo ah xaaladan oo kale, waxaa muhiim ah inaan daganaan muujino, isla markaana aan isku duubnaano”.
“Waxaan mar walba maqleynaa wararka xanta ah ee ku aadan in shaqada laga casilayo Julen Lopetegui, taasi waa wax iska caadi ah, Lopetegui wuu nala sii joogi doonaa, qof walba wuxuu iku diyaarin doonaa kulanka El Clásico, waxaan rajeynayaa inaan natiijo fiican soo gaarno kulanka Axada soo aadan”.
"Jaamacad ayay wax ka dhigi karaan.".- Mourinho oo si aan horey loo Maqal u AMMAANAY Bonucci iyo Chiellini
Manchester United ma sameyn xitaa Hal Badel kulankii xalay ee Juventus.....!!!(Ogoow SABABTA)